i-England ingaphambili ngo-1-0 kwi-Youth Test series
Ophosa ngokushesha u-Jack Plom uhole i-England njengoba benqobile, ngama-wicket ayisishagalolunye kumdlalo wokuqala we-Youth Test bedlala nama-Coca-Cola South Africa under-19s e-Scarborough Cricket Club ngoLwesibili. Iqembu lasekhaya lingaphambili kwi-series yemidlalo embili.
Ngolunye usuku oluguqubele, u-Plom usebenzise isimo esimuvunile njengoba ekhiphe ama-wicket amane ngama-runs angu-56, ukumisa izivakashi kumphumela omncane u-161 kwi-innings yesibili, bengaphambili ngama-runs angu-88. u-Ben Charlesworth akaphumanga enama-runs angu-41, ehlangene no-Oliver Robinson oshaye u-34 emabholeni angu-27 (8x4s, 0x6s) okusho ukuthi i-England inqobe kuma-overs angu-14.
Ekuqaleni, i-South Africa iqale usuku kungayihambeli kahle njengoba obagcinile ukushaya u-Joshua Richards no-Jacob Miltz baphume no-19 no-7 ngokulandelana kwabo kuma-overs amabili. u-Richards ukhishwe indida phakathi kwakhe no-Miltz, ngaphambi kokuthi akhishwe ukapteni we-England nge-run out, u-Tom Banton. u-Miltz – othole ama-runs amaningi kwiqembu elivakashile kwi-innings yokuqala – ukhishwe u-Plom nge-wicket yakhe yokuqala yosuku, ngesikhathi elishayela ezandleni zika-Alfie Gleadall.
Bezimisele, i-England iyisebenzile i-batting order yezivakashi njengoba u-Plom elandelise ngeyesibili, ekhipha u-Sinethemba Qeshile enama-runs ayisishagalolunye ngaphambi kokuthi enye i-run out ikhiphe u-Thamsanqa Khumalo (12), ubuyile emdlalweni emuva kokuthatha umhlalaphansi ngoba elimele osukwini lokuqala.
Nokho bekunemfutho yokushaya ngasemuva kukapteni, u-Wandile Makwethu (17), u-Jade de Klerk (18), u-Achille Cloete (26) no-Mondli Khumalo (23), iqembu lasekhaya liyigcinile incindezi ngokuqhubeka nokuthola ama-wicket. Ehambisana no-Plom, u-Luke Hollman (2/30) we-England no-Gleadall (2/24) baqede i-innings benama-wicket amabili umuntu eyedwa.
i-South Africa izobe ibheke ukulungisa kakhulu kumdlalo wesibili we-Youth Test ozodlalelwa e-Riverside Ground e-Durham ngoMsombuluko, 16 July.
Ikhulu lika-Banton kwi-England njengoba u-Peters eqhakazela i-SA U19s osukwini lesibili olumnandi u-Wandile Makwetu uzoba ukapteni we-SA U19s e-England u-Van Tonder ungaphambili kwabe-SA abathathu kwi-ICC U19 World Cup Select XI Ama-SA U19s ayiqeda kahle i-World Cup Ukuqhuba okokugcina kuma-SA U19s Ama-SA U19s ahlela indlela ebheke phambili i-Pakistan idlulela kwi-ICC U19 World Cup semi-final i-New Zealand ihlula i-South Africa U19s nokho u-Rolfes ethole ikhulu Ama-SA U19s afuna ukuqhubeka “nezikhathi eziguqula umdlalo” Ama-SA U19s adlulela kwi-U19 World Cup Super League i-SA U19s ilungele inxenye yokulungiselela i-World Cup